गृहमन्त्री बादलसहितको टोली लिएर बागलुङ उडेको हेलिकोप्टर अन्तै पुग्यो, कहाँ केछ अवस्था ? — Imandarmedia.com
गृहमन्त्री बादलसहितको टोली लिएर बागलुङ उडेको हेलिकोप्टर अन्तै पुग्यो, कहाँ केछ अवस्था ?
काठमाडौं । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर ७, ७ र ९ मा बाढी तथा पहिरो पीडितका लागि राहात बोकेर गएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहितको टोली चढेको हेलिकोप्टर अन्तै पुगेको छ ।
गृहमन्त्री बादलसहितको टोली बिहीबार बिहान नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत बाढी तथा पीहिरो प्रभावित क्षेत्रतर्फ प्रस्थान गरेकामा खराब मौसमका कारण स्याङ्जाबाट पोखरा फर्किएको गृहमन्त्री बादलका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री थापा सहितको टोली अहिले पोखरा विमास्थलमा रोकिएको छ । मौसम खुलेपछि मात्रै बागलुङतर्फ जाने भट्टराईले जानकारी दिए । गृहमन्त्री थापासँगै संघीय सांसद एवम् नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सीईओ अनिल पोखरेल लगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रतर्फ लागेका थिए ।
थापाका प्रेस संयोजक भट्टराईले मौसम सामान्य नभएका कारण हेलिकप्टर काठमाडौं उडेको जानकारी दिए। बाग्लुङमा अहिले वर्षासँगै बाक्लो कुहिरो लागेको छ। ‘हामी एक घन्टाजति पोखरा विमानस्थलमा बस्यौं, मौसम साँझसम्म खुल्ने संकेत नदेखिएपछि फर्किने निधोमा पुगेका हौं,’ भट्टराईले भने।
यस्तै बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकामा बुधबार राति गएको बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएकामध्ये अहिलेसम्म १० जनाको शव फेला परेको छ । नगरपालिकाको ७, ८ र ९ वडाको तटीय वस्तीमा भूजी खोलाको बाढी पस्दा ४१ जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । बेपत्ताको सङ्ख्या अझ बढ्न सक्ने अनुमान प्रहरीको छ ।
यसैबीच यता युवाहरुले स्वस्फुर्त रातो मछिन्द्रनाथको रथ तानेपछि ललितपुरको पुल्चोकमा तनाव भएको छ । प्रहरी र स्थानीय युवाहरुबीच झडप भएको छ । प्रहरीले रथ तान्न रोकेपछि युवाहरुले विरोध गरेका थिए । त्यही बेला प्रहरीले पानीको फोहोरा हान्न ट्यांक ल्याएपछि युवाहरुले ढुंगामुढा गरेका छन् ।
त्यस क्रममा केही प्रहरी घाइते भएका छन्। निशेधाज्ञामा सुनसान रहने पुल्चोकको बीच सडक यति बेला तनावपूर्ण छ। अघिसम्म रथ तान्न भेला भएका स्थानीयलाई प्रहरीले तितरबितर पारेका छन्। सडकको बीचमा ठूलो संख्यामा प्रहरी उपस्थित छ। प्रहरीले सडकबाट भीड पन्छाएर रथलाई घेरेर बसेका छन्।
लामो समयदेखि थाती रहँदै आएको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई निषेधाज्ञाकै बीच तानिएको हो। मलमास अगाडि नै मच्छिन्द्रनाथलाई बुंगमती लग्नुपर्ने प्रचलन कारण अधीर भएका स्थानीय सयौंको संख्यामा पुल्चोकमा जम्मा भएका थिए। आक्रोशित भीडले यो प्रहरी कारबाहीलाई स्थानीय जात्रापर्वमाथिको दमनका रूपमा लिएको छ।
प्रहरीले सुरूमा रोक्न खोजे पनि सयौंको संख्यामा आएका जनतालाई उनीहरूले रोक्न सकेका थिएनन्। बीच सडकमा ल्याउँदा रथ केही लच्केको देखिएको थियो। कोरोना महामारीबीच उपस्थित यति ठूलो भीडमध्ये कतिपयले मास्क लगाएका छन् भने मास्क नलगाउनेहरू पनि थुप्रै छन्।
कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण निर्धारित तिथिमा हुन नसकेको रथयात्रा अहिलेसम्म स्थगित रहँदै आएको थियो। असार १० गतेबाट रथ निर्माण सुरू भएको थियो। मच्छिन्द्रनाथ महास्नानको भोलिपल्टदेखि रथ बनाउने चलन छ। गत चैत २७ गते मच्छिन्द्रनाथको निर्माण समय तोकिए पनि लकडाउनका कारण काम हुन सकेको थिएन। लकडाउन खुकुलो भएसँगै नयाँ साइत निकालेर क्षमापूजा गरेपछि पुल्चोकमा निर्माण सुरू गरिएको थियो।
पछिल्लाेपटक भाद्र १ गतेबाट तानिने भने पनि गुठी संस्थाकाे आदेशका कारण राेकिएकाे थियाे। केही व्यक्तिले भने कोरोनाको समयमा सबैको सुरक्षाको ख्याल राख्दै कर्फ्यू लगाएर भए पनि रथयात्रा सम्पन्न गर्नुपर्ने राय दिएका छन्।
चीनबाट आयो अर्को ड’रलाग्दो खबर, नयाँ संक्रमणले थुप्रै मानिस बिरामी, यस्ता छन लक्षणहरु
एकाएक किन स्थगित भयो नेकपा हाइकमाण्ड बैठक ?